काठमाडौं, । राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासंघ, नेपालले महासंको केन्द्रिय कार्यालय ललितपुरको मानभवनबाट घर जाने क्रममा यही बैशाख ३ गते साँझ कार्यालय सचिव सन्तोष खड्कामाथि अज्ञात समूहबाट गोली प्रहार भएको भन्दै उक्त घट्नाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले खड्कामाथि भएको आक्रमण सिंगो ख्रीष्टियन समूदायमाथिको आक्रमण भएको आरोप लगाउँदै उक्त घट्नाको दोषीको बारेमा सरकारले सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषिमाथि कडा कारबाहीको मांग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष सि.बी गहतराजले उक्त घट्नाको निन्दा गर्दै भने,‘हाम्रो...
राष्ट्रपतिको भारतमा अपमान भएकै हो ? के जवाफ दिए मोदीले ?
काठमाडौं, ६ वैशाख । परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतका अनुसार भारत भ्रमणमा रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारत कोही पनि जजमान वा मेहमान नभएको भनाइ राखेका थिए । ‘हामी बराबर छौँ, कोही ठूलो–सानो छैनौँ,’ मोदीको भनाइ उद्धृत गर्दै महतले भने । यसअघि एउटा व्यापारिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय विदेश राज्यमन्त्री भिके सिंहले पनि नेपाल र भारत समान रहेको, कुनै ठूलो–सानो नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । नयाँपत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ । ‘स्थानीय निर्वाचनमा यसो गर्नुस्, उसो गर्नुस्...
नेपाल–भारतको विवाद अब सिंगापुर अदालतले फैसला गर्ने
काठमाडौं, ५ वैशाख । इन्धन ढुवानीका क्रममा आयल निगम र भारतीय आयल निगम (आइओसी)बीच विवाद भए सिंगापुर अदालतले फैसला गर्ने भएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार विवादरहित समाधान गर्न तटस्थ मुलुकको अदालतमा फैसला गर्ने सहमति भएको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ । आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराका अनुसार यसअघि भारतको अदालतले गर्ने सहमति भएको थियो । तेस्रो मुलुकको अदालतबाट हुने बहस निष्पक्ष हुने मन्त्रालयको ठहर छ । ‘भारतमा ट्यांकर दुर्घटना हुँदा भारतीय कानून लाग्छ, त्यस्तै नेपालको हकमा पनि नेपालकै कानुन लाग्छ । तर, दुर्घटना हुँदा भारतको अदालतमा छलफल हुने नियम...
तीन शताव्दीसम्म बाँचेकी संसारकै वृद्ध महिलाको निधन
एजेन्सी । संसारकै सबैभन्दा वृद्ध महिलाको निधन भएको छ । संसारकै वृद्ध महिला इटलीकी एमा मौरेनोको १ सय १७ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । एमालाई आधिकारिक रुपमा १९ औं शताब्दीमा जन्मिएर जीवित रहेकी एकमात्रै मानिसका रुपमा मानिन्थ्य । उनको जन्म २९ नोभेम्बर १८९९ मा इटालीमा भएको थियो । उनले तीन शताब्दीमा जीवन बाँचिन् । यस क्रममा उनले खराब वैवाहिक जीवन, आफ्नो एकमात्रै छोराको मृत्यु, दुई विश्वयुद्ध र इटालीमा ९० भन्दा बढी सरकार देखिन् । आफ्ना ८ जना दाजुभाई दिदीबहिनीमा सबैभन्दा जेठी एमा आफ्नो जीवनको लामो उमेर बाँच्नुको राज आफ्नो आमा बाबुको जिन र प्रतिदिन तीनवटा अण्डाको...
बालकृष्ण ढुंगेल सरकारी गाडीमै सीमापार
काठमाडौं, ४ वैशाख । सर्वोच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका बालकृष्ण ढुंगेललाई एक साताभित्र पक्राउ गरी थुनामा राख्न आदेश दिएकै दिन उनी सरकारको संरक्षणमा सीमापार पुगेका छन् । सर्वोच्चबाट दोस्रो आदेश आउँदा काठमाडौंको तीनकुनेमा रहेका ढुंगेललाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सुरक्षाकर्मीको गाडीमा राखेर नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र झापको काँकडभिट्टा लगेर छाड्न निर्देशन दिएकाले उनलाई प्रहरीले नै प्राइभेट गाडीको व्यवस्था गरी सीमा कटाएको बुझिएको छ । तरुण साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । उनी त्यहाँबाट भारतको सिक्किम पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ । सर्वोच्च...
चैत्र ३१, २०७३- साउदी अरवस्थित नेपाली दूतावासले १० जना महिला कामदारलाई उद्धार गरी स्वदेश पठाएको छ । उनीहरुमध्ये २ जना बुधबार राती र ८ जना बिहिबार बिहान एयर अरेबिया हुँदै काठमाडौं आइपुगेका हुन् । उद्धारमा हुनेमा घरेलु कामदारका लागि कुवेतवाट साउदी लगिएका घरेलु कामदार समेत छन् । नेपाली दूताबासका अनुसार लम्जुङकी अमृता गुरुङ, टेककाशी घले, वर्दियाकी पार्वतीदेवि न्यौपाने, लक्ष्मी परियार र रामेछापकी चन्द्रमाया सुनुवारलाई उद्धार गरिएको हो । उनीहरु कम्पनीमा कार्यरत कामदार हुन् । कम्पनीले भिसा नलगाई गैरकागजात हैसियत बनाएपछि उद्धारका लागि दूताबास पुगेका थिए...
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मागी खाने भाँडो? सांसद्हरु आक्रोशित
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले निर्माणाधीन भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बुधवार पर्यटनमन्त्री दिलनाथ गिरी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायतलाई बोलाएर छलफल गरी भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निर्धारित समयभित्रै काम सम्पन्न गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको विमानस्थलको निर्माणको काम सन्तोषजनक नरहेको भन्दै आयोजनाको...
चर्चित सगरमाथा आरोही आङरिता शेर्पा अस्पतालमा, मन्त्रीले दिए बचन
काठमाडौं । चर्चित सगरमाथा आरोही आङरिता शेर्पा अस्वस्थ भएर अस्पताल भर्ना भएका छन् । ‘हिमचितुवा’ उपनामले चिनिएका र बिना अक्सिजन दश पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका शेर्पाको राजधानीस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । अचानक बेहोस भएपछि उनलाई एक हप्ता अगाडि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । हिमाल आरोहण र नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई बिश्वमा चिनाउन उनको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । सोलुखुम्बु नाम्चे घर भएका ७३ बर्षिय शेर्पाको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । शेर्पाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिन पर्यटन...
नेपालको शिर विश्वसामु उचो पार्ने आङरिता मृत्युसँग संघर्ष गर्दै, राज्यले गरेन वास्ता
काठमाडौं । विनाअक्सिजन १० पटक सगरमाथा आरोहण गरी नेपालको शिर विश्वसामु उचो पार्ने पर्वतारोही आङरिता शेर्पाको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएको छ। हिमचितुवा उपनामले चर्चित शेर्पा सिकिस्त बिरामी भएपछि काठमाडौंको बाँसबारीस्थित न्युरो अस्पतालमा आइतबार भर्ना गरिएको हो। विनाअक्सिजन सगरमाथा आरोहण गर्न सफल ७० वर्षे शेर्पा थलिए पनि राज्यले अहिलेसम्म कुनै सहयोग नगरेको छोरी डोल्मा ल्हामु शेर्पाले दुःखेसो पोखिन्।। ‘नेपालको पर्वतारोहण इतिहासमा बुबाको योगदान अतुलनीय रहेकोमा दुईमत छैन’, उनले भनिन्, ‘तर आज उनी आईसीयूमा मृत्युसँग संघर्ष गरिरहे पनि राज्यले वास्ता...
सप्तरीको सदरमुकाममा फेला परेको सकेट बम सेनाको टोलीद्धारा निष्क्रिय
राजविराज । सप्तरीको सदरमुकाम राजविराजस्थित दुई स्थानमा आज बिहान फेला परेको सकेट बमलाई नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय पारेको छ । राजविराजस्थित कृष्णदल गणबाट सेनानी रुद्रवीर कार्कीको नेतृत्वमा गएको डिस्पोजल टोलीले उक्त बम निष्क्रिय पारेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । राजविराज नगरपालिका–४ स्थित कल्टु पोखरी छेउमा रहेको व्यापारी विनोद चौधरी ९दास०को घरको मूलगेट र राजविराज नगरपालिका–५ स्थित कञ्चपुर रोडमा रहेको छोटु भनिने रवीन्द्र यादवको घर अगाडि बम फेला परेको थियो । दुवै ठाउँमा फेला परेको बमलाई राजविराज नगरपालिका–४ मा रहेको कल्टुपोखरीमा डिस्पोजल...
बर्दिया, २२ चैत । ठाकुरबाबा नगरपालिका–४ की २१ वर्षीया दुर्गा सावदको इच्छा सानैदेखि नेपाल प्रहरी वा सेनामा जागिर खाएर देशको सेवा गर्ने इच्छा थियो । कक्षा ८ पास गरेर पढाइ बिट मारेकी दुर्गाले सानैदेखिको धोको पूरा गर्ने गत वर्ष नेपाल प्रहरीमा आवेदन दिइन् । छनोटका विभिन्न चरण पार गरेकी दुर्गाले अन्तिममा आएर लिखित परीक्षा पास गर्न सकिनन् । स्थानीय तह चुनावका लागि आह्वान गरिएको म्यादी प्रहरीमा आवेदन दिन सदरमुकाम आएकी दुर्गाले भनिन्, “प्रहरी हुने सानैदेखिको इच्छा हो । पहिलोपटक असफल भएँ । प्रहरी नै हुन नसके पनि यसपालि म्यादी प्रहरी बन्ने धोको छ ।” उनीजस्तै धेरै...
यी हुन् २७ करोड २४ लाख झ्वम पार्ने सरकारी कर्मचारीहरू
काठमाडौं, २१ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नलसिङगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता गरेको भन्दै आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । परामर्शदाता छनोटमा बढी बोलकबोल गर्नेलाई तोकिएको मापदण्ड नपुगाई मनोमानी रूपमा अङ्क दिएको आरोप अख्तियारको छ । गोरखापत्र दैनिकले समाचार छापेको छ । अख्तियारले परामर्शदाता छनोटमा आयोजनालाई २७ करोड २४ लाख ५४ हजार ३५१ हानी नोक्सानी पुगाउने गरी निर्णय भएको ठहर गरेको छ । आयोजना निर्देशन कुँवरसहित अख्तियारले...
मुग्लिन नारायणघाट सडकमा सुख्खा पहिरो, केहि सवारी पुरिए
चितवन । मुग्लिन– नारायणघाट सडक खण्डको घुमाउने भन्ने ठाउँमा सुख्खा पहिरो जाँदा केही सवारी साधन पुरिएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार मुग्लिनबाट ११ किलोमिटर टाढा घुमाउनेमा बिहान पौने ११ बजे सुख्खा पहिरो गएको हो । पुरिएका सवारी साधनमध्ये यात्रुबाहक कार र एक्साभेटरको भने पहिचान खुलेको छ भने अन्य बिस्तृत विवरण आइसकेको छैन् । पहिरोमा कति सवारी र मानिस पुरिएका छन् भन्ने एकीन भइसकेको छैन । घटनापनि अहिले नारायगढ मुग्लीङ सडकखण्ड अबरुद्ध छ । ...
म्यादी प्रहरीलाई कुन युनिफर्म ? : पोसाक अन्योलमा
काठमाडौँ । स्थानीय तहको चुनावका लागि भर्ना लिइएका म्यादी प्रहरीको पोसाक अन्योलमा परेको छ । गत शनिबारदेखि भर्ना सुरु भएको म्यादी प्रहरीको २२ चैतमा नतिजा प्रकाशन गरी २५ गतेदेखि तालिम सुरु गर्न लागिएको छ । तर, शनिबारसम्म म्यादी प्रहरीको पोसाकको टुंगो लागेको छैन । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई पोसाक खरिद गर्न समय पुग्ने अवस्था छैन । जसका कारण म्यादी भर्ना लिइरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू अन्योलमा छन् । यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ। ‘तालिम अगाडि नै उनीहरूलाई युनिफर्म दिनुपर्छ,’ एक जिल्लाका एसपी भन्छन्, ‘अब पाँच दिन मात्र बा“की छ, कसरी युनिफर्म...
काठमाडौं - नेपाल–भारत सीमा विवादकै कारण कञ्चनपुरको पुनरवास नजिक घटना भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत घटनाको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै घटनाको प्रमुख कारण सीमा विवाद देखाएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ । प्रतिवेदनमा सरकारले सिमा विवाद तत्काल नटुंग्याए अन्य भागमा समेत यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सुझाव दिइएको छ । सीमा क्षेत्रमा फागुन २६ मा भएको घटनामा गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । टिकाराम चापागाईं गम्भीर घाइते भएका थिए...